PressReader - Ilanga langeSonto: 2017-09-24 - ZISAMILE EZOKUBUYEKEZWA
Ilanga langeSonto - 2017-09-24 - Izindaba - KNOWLEDGE SIMELANE
ZISAMILE izinsuku ezintathu okungumhla zingama-23, 24, 25 kumfumfu (October) ezimiselwe ukubuyekezwa kwesinqumo seNkantolo enkulu yamajaji ethekwini sanyakenye secala lombango ophakathi kohlangothi lwaseBuhleni oluholwa yinkosi umduduzi "Nyazilwezulu" Shembe noyise inkosi uvelamuhle "Imisebeyelanga" Shembe wasethembezinhle.
Kulindeleke ukuba lezi zinhlangothi zenze izethulo zazo kumajaji amathathu enkantolo enkulu emgungundlovu lapho kuzobe kucutshungulwa ukuthi ngabe inhloko yamajaji kwazuluNatal umnu Achmat Jappie, wayihlaba esikhonkosini noma yaphuma eceleni ngesinqumo sakhe.
Inkantolo yamajaji ethekwini yanquma ngonyaka odlule ukuthi okunguyena mholi osemthethweni wasebuhleni yimisebeyelanga, emuva kokukhothama kwenkosi uvimbeni "Thingolwenkosazane" Shembe ngonyaka wezi-2011.
Kwasuka udungunyane ngomfihlo wayo lapho inkosi yamaqadi umqoqi Ngcobo yamemezela ukuthi unyazilwezulu lwaqokwa nguyise ngomlomo lutshela yena.
Kuwo lowo mfihlo, ummeli wothingo ngaleso sikhathi umnu Zwelabantu Buthelezi, wafunda incwadi owathi yayibhalwe yilo uthingo luqoka umfowabo Imisebeyelanga ukuba ihlale esihlalweni uma kwenzeka lukhothama.
Yikho lokhu okwaphoqa Imisebeyalanga ukuba ifake isimangalo sokuthi isimemezelo senkosi yamaqadi sasingekho emthethweni.
Ijaji umnu Jappie lakhipha isinqumo ngobufakazi obethulwa phambi kwalo, lagcizelela ukuthi libheke kakhulu amaphuzu okuthi ngabe incwadi ekhomba ozolandela yabe ibhalwe yilo ngempela yini uthingo, lanquma ukuthi nebala ochwepheshe bokubhalwa kwezincwadi nokusayina bakuqinisekisa lokho.
Kuthe nje lisakhipha isinqumo esivuna abasethembezinhle, unyazi olwalukhona enkantolo lwajuba ummeli walo u-advocate Rajesh Choudree ukuba asedlulise ngoba lwethemba ukuthi amajaji amathathu angaphuma nesinqumo esehlukile kunalesi.
Ngesonto eledlule abameli basebuhleni bathumele onke amaphuzu abaphikisa ngawo isinqumo senkantoilo kubameli basethembezinhle.
Ummeli wasethembezinhle ngu-advocate Archie Findlay.
UVELA "Imisebeyelanga " Shembe